ငါစကားပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုဖုံးကွယ်သလဲ? - Skype
အဓိက > Skype > စကားပြောဆိုမှု Skype ကို unhide - ပြproblemsနာအတွက်အဖြေများ
စကားပြောဆိုမှု Skype ကို unhide - ပြproblemsနာအတွက်အဖြေများ
၏ထိပ်မှာချက်တင်စာရင်း, တွင်ပါဝင်သောစကားလုံးသို့မဟုတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများရိုက်ထည့်ပါချက်တင်မင်းလိုချင်တဲ့မဖုံးထိုကဲ့သို့သောပေးပို့သူသို့မဟုတ်ပါဝင်သူရဲ့အမည်အဖြစ်။ လက်ဝဲ toolbar ကိုအတွက်။ Theချက်တင်မင်းရဲ့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ချက်တင်အစာကျွေး >မဖတ်ရ။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ဤဆောင်းပါး၌ Instagram ရှိသင်၏စကားပြောဆိုမှုများနှင့် DM များအားလုံးကိုမည်သို့ပြန်လည်ထူထောင်မည်ကိုရှာဖွေသွားပါမည်။
သွားကြရအောင် ! စတင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းများကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ chat list ထဲက down chevron ကိုရွေးပါ။ ခလုတ်။
ရွေးချယ်ပါHidden chatsမင်းကိုယူလာဖို့လျှို့ဝှက်စကားပြောဆိုမှုများနောက်ကျောသင့်ရဲ့အမြင်သို့။ မှတ်ချက်။ ။ ရှာဖွေမှုကိုရှာရန်လည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည်စကားပြောဆိုမှုရှာရန်အမည်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အမည်စကားပြောဆိုမှုနောက်တဖန်
Skype မှတစ်ဆင့်သီးသန့်စကားပြောဆိုမှု (အဆုံးမှအဆုံးစာဝှက်ဖြင့်) မည်သို့စတင်နိုင်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Skype ပုံစံအသစ်ကိုကူးယူရန်လိုအပ်သည်။ လင့်ခ်များအတွက်ဖော်ပြချက်စစ်ဆေးပါ။ Skype ကိုဖွင့်တဲ့အခါဘယ်ဘက် sidebar ကိုစစ်ဆေးပြီး + ခလုတ်ကိုရှာပါ။
Find Now ကိုစတင်ရန် 'New Private Conversation' option ကိုရွေးချယ်ပြီးအဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်ဖြင့်စကားပြောချင်သောဆက်သွယ်ရန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သီးသန့်စကားပြောခန်းအတွက်ဖိတ်ကြားချက်အသစ်တစ်ခုပို့ပါ အခြားတစ်ဖက်မှပုဂ္ဂိုလ်သည်စကားပြောရန်သင်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံသင့်သည်။
win7 wont update ကို
ချက်တင်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံပြီးသည်နှင့်သင်စကားစမြည်ဝိုင်းစတင်နိုင်သည်။ သင်၏စာနှင့်ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုအဆုံးမှအဆုံးသို့သီးသန့်သော့များဖြင့်စာဝှက်ထားသည်။ NSA အပါအ ၀ င်ဘယ်သူမှသင့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုဖတ်နိုင်၊
သင်လုံခြုံရန်လိုအပ်သည်မှာ chat သူငယ်ချင်းနှင့်သင်၏လုံခြုံရေးကုဒ်ကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်ရရန်အတွက်ညာဘက်အောက်ခြေရှိသော့ခတ်သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ ငါသိသလောက်ဆိုရလျှင်ဆောင်းပါးခေါ်ဆိုမှုများသည်အဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်မထားဘူး။
လျှို့ဝှက်စကားပြောဆိုမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်။ chat ၀ င်းဒိုးတွင်၊ သင်၏အမည်အောက်ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်လိမ့်မည်၊
ယခုသီးသန့်စကားပြောဆိုမှုအဆုံးသတ်ရန်ရွေးစရာကိုရွေးပါ။ သင်ဤအချက်ကိုနှစ်သက်ပါသလား ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မထောင်ပါသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်ဤအချက်ကိုနှစ်သက်ပါသလား ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မထောင်ပါသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းပါ။
မင်းအထိခိုက်မခံတဲ့ (သို့) လျှို့ဝှက်အချက်အလက်တွေပေးပို့နိုင်တယ်Skypeနှင့်မင်း၏ထို option ရှိသည်ပုန်းအောင်းမင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများဘယ်အချိန်မှာမင်းသင့်ရဲ့ privacy ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါခံစားရသည်။စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုကိုဖျောက်ထားခြင်းမဖျက်ပါဘူးကနှင့်လူများနေဆဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မက်ဆေ့ခ်ျများunhiding အားဖွငျ့ဖွစျသညျစကားပြောဆိုမှု။
ဒါဟာအဓိက panel ကိုအတွက်စကားပြောဆိုမှုရဲ့ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောဆိုမှုဖျောက်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာ menu ရဲ့အောက်ခြေမှာပါပဲ။ အတည်ပြုစာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ OK ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုစကားဝိုင်းသည်မြင်ကွင်းမှဝှက်ထားသောဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုရသောအခါသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်ပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အစွန်အဖျားတစ်ခုတင်သွင်းသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Marites လိုပဲသင်မဖုံးချင်တဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုရှာဖွေပါ။ ထို့နောက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှစကားပြောဆိုမှုကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင်မက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုသည့်စာရိုက်သည့်နေရာကွက်လပ်တွင်တစ်ခုခုရေးပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်တောင်သင်မလိုပါ၊ မည်သည့်အရာကိုမဆိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါကစကားပြောဆိုမှုကိုဖုံးကွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကမင်းရဲ့ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းခဲ့တာလား။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒီကမကူညီဘူး
ကျွန်ုပ်၏ Skype ပြောဆိုမှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း။
သင်၏ Skype သို့မဟုတ် Microsoft အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။ 'View' menu ကိုနှိပ်ပြီး 'Show Hidden Conversations' ကိုရွေးပါ။ သင်အသစ်ပြန်သွင်းထားသည့်အရာများအပါအဝင်သင်၏လတ်တလောပြောဆိုမှုများကိုကြည့်ရန်“ လတ်တလော” tab ကိုနှိပ်ပါ။ စကားပြောဆိုမှုကိုသင်မတွေ့ပါကသင်၏စကားပြောဆိုမှုသမိုင်းအပြည့်အစုံကိုပြသရန်စာရင်း၏အောက်ခြေရှိ“ Show Earlier Messages” ကိုနှိပ်ပါ။
'View' menu ကိုနှိပ်ပြီး 'Show Hidden Conversations' ကိုရွေးပါ။ သင်အသစ်ပြန်သွင်းထားသည့်အရာများအပါအဝင်သင်၏လတ်တလောပြောဆိုမှုများကိုကြည့်ရန်“ လတ်တလော” tab ကိုနှိပ်ပါ။ စကားပြောဆိုမှုကိုသင်မတွေ့ပါကသင်၏စကားပြောဆိုမှုသမိုင်းအပြည့်အစုံကိုပြသရန်စာရင်း၏အောက်ခြေရှိ“ Show Earlier Messages” ကိုနှိပ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးရှိသတင်းအချက်အလက်သည် Skype 6.6 နှင့်သက်ဆိုင်သည်။